Semalt विशेषज्ञ Caldera फारम मा विस्तृत, WordPress साइटहरु को लागी सब भन्दा शक्तिशाली प्लगइन
सम्पर्क फारम स्पाम चिढचिढाहट पार्ने र कष्टप्रद छ र तपाईंको ब्लग वा वेबसाइटमा धेरै सुरक्षा जोखिमहरू निम्त्याउँछ। त्यसो भए, स्प्याम ब्लक गर्न र तपाईंको सम्पर्क फारम सुरक्षित राख्नु तपाईंको प्राथमिकता हुनुपर्छ यदि तपाईं क्याल्डेरा फर्महरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने। आर्टेम अब्गारियन, Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, व्याख्या गर्दछ कि सम्पर्क फारमको लागि व्यापक र शक्तिशाली एन्टी-स्प्याम प्रोग्राम सक्षम गर्न, तपाईंले पहिले पूर्ण रूपमा नयाँ फारम सिर्जना गर्नुपर्नेछ। एकचोटि यो काम सकिएपछि, एन्टी-स्प्याम उपकरणले तपाइँका फारामहरूलाई स्पाम र बोटको हमलाहरूबाट स्वतन्त्र राख्न कार्य गर्दछ।
के गर्ने यदि तपाईं क्याल्डेरा फारामहरूसँग स्प्याम पाउनुभयो?
यदि तपाईं क्याल्डेरा फारामहरूको साथ पूर्वनिर्धारित मह भाँडो प्लगइन प्रयोग गर्नुहुन्छ र यो ठीकसँग काम गरिरहेको छैन भने, स्प्यामबाट तत्काल छुटकारा पाउन केहि तरिकाहरू छन्:
सर्वप्रथम, तपाइँ राम्रोसँग व्यवस्थित र व्यवस्थित वर्डप्रेस ब्ल्कर प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ जसले तपाइँको वेबसाइटमा पुग्न सबै बट्स र माकुरो रोक्न सुनिश्चित गर्दछ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले यस सम्बन्धमा WPEngine र Pantheon प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईं ईमेल सेवाहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन स्पामलाई स्वत: रोक्दछ। हामी तपाईंलाई Caldera फाराम प्रो सुझाव दिन्छौं Caldera फारामहरूको लागि र सबै अन्य ईमेलहरूको लागि सेंडग्रिड।
एन्टि-स्प्याम प्लगइन प्रयोग गर्न साथ पनि राम्रो छ। तपाईंको वर्डप्रेस प्लगइन डाइरेक्टरीमा हजारौं एन्टी-स्प्याम प्लगइनहरू छन्, र तपाईं प्रासंगिक प्लगइन छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो स्थापना गर्नुहोस्।
के यो reCaptcha क्षेत्र को बारे मा?
यो पुन: क्याप्चा प्राप्त गर्न राम्रो छ र तपाइँको वेबसाइट मा स्पाम टिप्पणीहरू रोक्न। यसले Caldera फारामहरूसँग राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ त्यसैले तपाईं यसको सेटिंग्स म्यानुअली समायोजित गर्नु पर्ने थियो। यो सुरक्षित छ तल उल्लेखित पूर्वनिर्धारित एन्टि-स्प्याम प्लगइनहरू भन्दा कम प्रभावकारी र उपयोगी छ भन्ने कुरा सुरक्षित छ।
Caldera फार्म विरोधी स्पाम:
यदि तपाइँ एक WordPress वेबसाइट को मालिक हुनुहुन्छ भने, तपाइँले स्प्याम र भाइरसहरूबाट Caldera फारमहरू रोक्नको लागि यो प्लगइन जति सक्दो चाँडो स्थापना गर्नुपर्नेछ। यो प्रयोगकर्ता-मैत्री र वेबसाइट मैत्री प्लगइन हो जुन निःशुल्क छ र दर्जनौं सुविधाहरूको साथ आउँदछ। यसको प्रयोग गरेर, तपाईं कसरी सुन्दर सम्पर्क फार्म विकास गर्ने विस्तृत निर्देशनहरूको पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्लगइनले ड्र्याग एण्ड ड्रप फारम बिल्डर्स, प्रत्यक्ष पूर्वावलोकन विकल्पहरू, फार्म निर्माणको गतिलाई टेम्प्लेटहरू प्रदान गर्दछ, र केही सेकेन्डमा उत्तरदायी फारामहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
सफा कुरा कुरा विरोधी स्पाम:
यो वर्डप्रेस प्लगइन तपाईको Caldera फार्म सजिलैसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ र टिप्पणी सेक्सनमा स्प्याम रोक्न मद्दत गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि यो दुबै नि: शुल्क र प्रीमियम संस्करणहरूमा आउँदछ; यसको मतलब यो छ कि नि: शुल्क संस्करण साना व्यवसाय र निजी ब्लगका लागि राम्रो छ र प्रीमियम संस्करण ठूला वेबसाइटहरू र अनलाइन ब्रांडहरूको लागि उत्कृष्ट छ। यसको गुरुत्वाकर्षण फाराम विकल्प तपाईंको अवस्थित फारामहरू सम्पादन गर्न र उनीहरूलाई एक शक्तिशाली र असाधारण दृश्य दिन सक्षम गर्न सकिन्छ।
यो Caldera फारामहरूको लागि एक व्यापक र उपयोगी WordPress प्लगइन हो। यसले नि: शुल्क एन्टी-स्प्याम सेवाहरू प्रदान गर्दछ र इन्टरनेटमा लाखौं सक्रिय स्थापनाहरू छन्। सम्पर्क फार्म also लाई पनि यो प्लगइन प्रयोग गरेर सम्पादन गर्न सकिन्छ र यो प्रयोगकर्ता मैत्री हो। यसबाहेक, त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि विस्तारहरूको बहु-समूहहरू छन्, र तपाईं यो आवश्यकताहरू र अपेक्षाहरू अनुसार यो प्लगइन अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पुन: क्याप्चा समर्थन समावेश गर्दछ र तपाइँको लागि एजेक्स संचालित फाराम सबमिशन गर्न सक्दछ।